Manadio fitoeran-dabozia « photophore »
Déodorant : Azo analana vernis, anadiovana solomaso …
Misoroka ny fofona ratsy avy amin’ny hatsembohana ao ambany helika sy mampihena ny fivoahan’ny hatsembohana ny tena asan’ny « déodorant ». Azo ampiasaina amin-javatra hafa koa anefa izy ireny. Araho anie e!
Lasopy miloko mavo : hiatrehina ny ririnina !
Sady tsy mitondra tavy firy no ara-pahasalamana ary matsiro ireto lasopy atoro anao ireto. Efa akaiky rahateo ny ririnina, ka andao mba hanararaotra hanala ireo poizina ao anatin’ny vatantsika.
Randriambololona Célestine 25 taona namelomana ny ankohonany tamin’ny familiana taxi
Anisan’ireo Renim-pianakaviana iray amin’ny vehivavy dimy mpamily fiara karetsaka eto an-drenivohitra Randriambololona Celestine na i Neny Rasoa. Efa 25 taona nanaovana io asa fivelomana iray io izy nentiny namelomana ny ankohonany. Mbola manohy izany asa izany hatrany izy mandraka ankehitriny na dia efa 63 taona aza.
Chaussures et vêtements, les bonnes associations
Vous avez sûrement votre préférence en matière de chaussure. Toutefois, vous ne pouvez pas associer n’importe quel vêtement avec n’importe quelle chaussure. Ainsi, en ces fêtes de fin d’année, il faut garder en tête certaines règles :
Nilalao fitia tamin’i René
Tantara efa mahazatra loatra izany ary naverimberiko matetika nolalaovina tao an-dohako.
Tsy niafina intsony ny fitiavako an’i René
Saika nahalala avokoa ny tao amin’ny fianakaviako fa raiki-pitia tamin’i René aho.
Tamin’ny fotoana nandraketana an-tsary ilay fandaharana dia nifamotoana tao amin’ny trano fisakafoana an’i Guysy i Dodo Morali indray izahay.
Tsy avy hatrany akory dia esorina, fa avela hangatsiaka indray, mandritry ny alina manontolo. Ho mora kokoa ny hisintona ireo tain-dabozia niverina nivaingana, fa efa nihataka tamin’ilay fitoeran-dabozia. Raha sanatria tsy mora miendaka ireo tain-dabozia, rehefa narotsaka ao ny rano, dia somary sokirina amin’ny sotrokely dieny mbola mafana ny rano.
Esorina amin’ny hatsiaka
Ampidirina ao anaty « congélateur » mandritra ny ora vitsy ilay fitoeran-dabozia. Somary mila fitandremana ihany ity fomba faharoa ity, indrindra raha mora vaky ilay fitoeran-dabozia. Tsy azo ajanona ela loatra ao anaty « congélateur » mantsy izy ireny, sao dia miraikitra. Mampifintina ny tain-dabozia ny hatsiaka, ka ho mora esorina izy ireo ary tsy dia hiraikitra be amin’ilay fitoerany intsony.
Aza ariana ireo tain-dabozia voaangona, fa mbola azo hanamboarana labozia vaovao fa ho entina aminao eto amin’ny Jejoo ihany izany.
Ho fisorohana :
Asiana fasika kely eo ambanin’ny labozia ao anatin’ilay fitoeran-dabozia tsara tarehy. Mora kokoa ny manadio azy amin’izay.